HGH Malaysia | Where to buy the hormone in Malaysia in Kuala Lumpur
HGH Malaysia | Where to buy Zimbabwe in Kuala Lumpur?
100% chibereko chekuwedzera Growth Hormone (HGH Somatotropin) muMalaysia
Isu tiri mumiriri wepamutemo wekukura kwemahomoni ekuMalaysia.
Chii chiri kukura hormone?
Kukura hormone (kukura hormone, STH, HGH, somatotropin) -
Iyo peptide hormone ye lobe yepanyika yepituitary gland, inoshandiswa mumitambo kuti igadzire musununguko.
Kukwegura kwomuviri kunobatanidzwa zvakananga nehuwandu hwekukura kwehomoni.
Pakati pevhesi, mushure memazana e20 makore ose e10 muzinga wekugadzirwa kwayo inowanikwa ne15%.
Kukura kwehomoni hakuiti zvepabonde kusiyana. Iko kuti, nhamba yaro yakafanana kune varume nevakadzi.
Pasinei nechokwadi chokuti kushandiswa kwezvinodhaka zvinowedzera hormone,
Kurambidzwa neWADO (World Anti-Doping Organization),
MuMalaysia zvinhu izvi zviri kutengeswa. Zviratidzo zvekushandiswa:
- Urongwa hweAn anti Aging
Mahomoni zvinhu zvakasikwa izvo zvinokosha muupenyu hwako. Nezera, izvo zvine mahomoni
Zvishoma nezvishoma zvinoderera, zvinotungamirira kukurumidza kwei
kukwegura uye kubuda kwehukama
Nezera rezvirwere. Hemorone inoshandiswa kunatsiridza hutachiona hudzorera muviri wako kusvika kumazinga emahomoni omukaka, uchidzosera kumatanho ayo muviri wako wave wakajaira mumakore mashoma.
- Tanga ne 2IU zuva rega rega usati warara (pasina dumbu).
- Tinosarudza kuchinja nguva yeMangwanani / Manheru (mwedzi miviri).